Wed, Apr 25, 2018 | 08:39:13 NST
निर्वाचन प्रतिकार होइन असहयोग गर्छौं : ठाकुर
विराटनगर, चैत १२ – तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन स्थगित हुनु पर्ने बताउनु भएको छ ।
कुनै हालतमा चुनाव रोकिन्नः प्रमुख आयुक्त यादव
सुमन तिमल्सिना/उज्यालो । विराटनगर, चैत १२ – निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय तह चुनावको कार्यतालिका अनुसार काम तीब्र पारिएको बताउनुभएको छ ।
के के छन् स्थानीय सरकारको अधिकार ?
आउँदो वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको चुनावको लागि गाउँगाउँमा चहलपहल बढिसकेको छ । चुनावमा उम्मेदवार हुन चाहने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले सक्रियता बढाइरहेका छन् ।
स्थानीय तह चुनावका लागि मतदान केन्द्र निर्धारणको काम अन्तिम चरणमा
काठमाडौं, चैत १२ – स्थानीय तह चुनावको लागि मतदान केन्द्र निर्धारणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ११ जिल्लाबाट केन्द्रको प्रस्ताव आउन बाँकी रहेको र २० गतेसम्ममा सबै केन्द्रको टुंगो लाग्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
दलको चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा जान नपाएकालाई स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन आयोगको आग्रह
काठमाडौं, चैत ११ – प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले दलको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्न नपाएकाहरुलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
मतदाता शिक्षामा ७५ करोड खर्च हुने
वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा ‘मतदता शिक्षा कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न ७५ करोड खर्च हुने भएको छ । मतदाता शिक्षाका लागि चाहिने सामग्रीदेखि जनशक्ति परिचनालन गर्न आयोगले ७५ करोड खर्च गर्ने तयारी गरेको हो ।
निर्वाचन अनुगमनसम्बन्धी निर्देशिका आउँदै
काठमाडौैं, चैत ११ – निर्वाचन आयोगले आशन्न स्थानीय तहको चुनावमा अनुगमनसम्बन्धी बेग्लै निर्देशिका ल्याउँदैछ । आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय चुनावमा हुने सबै प्रक्रियाको अनुगमनका लागि त्यस्तो निर्देशिका बन्दै गरेको र चाँडै जारी हुने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको छ : अर्थमन्त्री महरा
रोल्पा, चैत ११ – उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले स्थानीय तहको प्रारम्भिक खर्चका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको बताउनुभएको छ ।
७५ हजार म्यादी प्रहरीको भर्ना खुल्ला, कसरी भर्ने फारम ?
काठमाडौं, चैत ११ – नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने म्यादी प्रहरीको भर्ना खुलाएको छ । स्थानीय तहको चुनावका लागि ७५ हजार म्यादी प्रहरी चाहिने भन्दै शुक्रबारदेखि दरखास्त आह्वान गरिएको हो ।
चुनावमा बागी उम्मेद्वार दिनेले आजीवन एमालेमा फर्कन नपाउने
काठमाडौं, चैत १० – स्थानीय तहको चुनावमा एमालेका उम्मेद्वार विरुद्ध वागी उम्मेद्वारी दिने उम्मेद्वार आजीवन एमालेमा फर्कन नपाउनेगरी निष्काशन हुने भएका छन् ।
सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकामा फोरम लोकतान्त्रिक विजयी
सर्लाही, असोज ५ – सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकामा फोरम लोकतान्त्रिक विजयी भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षमा फोरम लोकतान्त्रिकका जवाहरलाल यादव १ हजार ९ सय ४६ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो ।
गस्तीमा गएका प्रहरीको दुर्घटनामा परि मृत्यु
दाङ, वैशाख १२ – मोटरसाइकल गस्तीमा रहेका एक प्रहरी जवानको मंगलबार राति दुर्घटनामा परी ज्यान गएको छ । अर्का प्रहरी जवान घाइते भएका छन् ।
गोरखा भूकम्पको ३ वर्ष पूरा, झण्डै ५ सय परकम्प
एभिसी भलिबल : नेपालले आज तुर्कमेनिस्तानसँग खेल्दै
भूकम्पले ढालेका सम्पदा उठाउन किन ढिलाई ?
घरमा आगलागी हुँदा ६० वर्षीय वृद्धकाे ज्यान गयो
च्याम्पियन्स लिगमा सलाहको जादू, लिभरपुलकाे शानदार जित
‘काँग्रेसभित्र वैचारिक र सैद्धान्तिक बहस अावश्यक’